शिवम् सिमेन्ट्सले अागामी तीन वर्षमा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत लाभांश दिन्छ-शतिस कुमार मोर - www.bikashnews.com : Shivam Cement
शिवम् सिमेन्ट्सले अागामी तीन वर्षमा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत लाभांश दिन्छ-शतिस कुमार मोर - www.bikashnews.com
शिवम् सिमेन्ट्सले अागामी तीन वर्षमा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत लाभांश दिन्छ-शतिस कुमार मोर
२०७५ असार २४ गते १०:१८विकासन्युज
नेपाली अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक रुपमा बढी लाभ दिने उद्योगमा सिमेन्ट उद्योग पर्छ भनेर धेरैले स्वीकार गरेका छन् । र, सिमेन्ट उद्योगमा व्यवसायिक घरानाहरुको लगानी निकै बढेको छ । विकासको यस क्रममा शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा ५२ लाख ८० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्दैछ । सिमेन्ट उद्योगलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर निष्काशन हुन लागेको यो पहिलो पटक हो । यस कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका चासोका प्रश्नहरु हामीले शिवम सिमेन्ट कम्पनीका प्रवद्र्धक लक्की ग्रुप नेपालका अध्यक्ष तथा उद्यमी शतिस कुमार मोरसँग राखेका छौं ।
शतिस कुमार मोरअध्यक्ष–लक्की ग्रुप नेपाल तथा प्रवद्र्धक–शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड
शिवम् सिमेन्ट्सको उत्पादन र बजार कस्तो छ ?
शिवम् सिमेन्टले हाल ओपीसी सिमेन्ट मात्र उत्पादन गर्दै आएको छ । दैनिक३ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन हुँदैछ । क्लिङकर १९०० टन उत्पादन गर्दै आएका छौं । बजारमा शिवम् सिमेन्ट्सको माग धेरै छ । हामीले माग अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । शिवम् सिमेन्ट्सको समेत लगानी रहेको होङसी शिवम सिमेन्ट प्रा. लि.को व्यवसायिक उत्पादन समेत शुरु भएको छ । यस कम्पनीको उत्पादन क्षमता सिमेन्ट र क्लिड.कर प्रतिदिन ६ हजार टन हुनेछ ।
कम्पनीको प्रवद्र्धकहरु को को छन् ?
शिवम् सिमेन्ट्समा शुरुमा चार ग्रुपले लगानी गरेका थिए । पछि दुई ग्रुप थपिएको छ । अहिले लक्की ग्रुप, एचआर गोयल ग्रुप, शारदा ग्रुप, देवेनरा ग्रुप, भिमसरिया ग्रुप र जेबी मारु ग्रुप अन्तरगत व्यक्तिगत शेयरधनिहरुको लगानी रहेको छ ।
शिवम् सिमेन्ट्सले होङसी शिवम सिमेन्टमा कुन मोडलमा लगानी गरेको हो ?
शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड अन्तरगत शिवम् होल्डिङ कम्पनी प्रा.लि. छ । त्यसमा शिवम् सिमेन्टको ८८ प्रतिशत लगानी छ । बाँकी १२ प्रति व्यक्तिगत लगानीकर्ता हरु चुनढुँगा खानीसँग सम्बन्धित विज्ञ व्यक्ति समेत हुनुहुन्छ ।
शिवम् होल्डिङ कम्पनीले होङसी शिवम सिमेन्टमा ३० प्रतिशत लगानी गरेको छ । त्यसमा शिवम् सिमेन्ट्सको मात्र २६.४० प्रतिशत लगानी हुन्छ । चैत मसान्तसम्ममा होङसी शिवम सिमेन्टमा होल्डिङ कम्पनी मार्फत ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानी भईसकेको छ । भविष्यमा यो लगानी विस्तार पनि हुनसक्ने सम्भावना छ ।
कम्पनीको व्यवस्थापकीय संरचना कस्तो छ ?
शिवम सिमेन्टस् लिमिटेडमा हाल ५ जनाको सञ्चालक समिति छ । सुरेन्द्र कुमार गोयल कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । रघुनन्धन मारु, अमित मोर, रोहित गुम्ता र शन्दिप कुमार शारदासञ्चालक हुनुहुन्छ । उहाँ पाँचै जना संचालकहरु विभिन्न उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा सक्रिय रहि लामो अनुभव हासिल गरेका व्यवसायीक व्यक्तिहरु संचालक समितिका हुनुहुन्छ ।
व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रको लामो अनुभव भएका र योग्य प्रोफेशनल व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । नवलकिशोर चौधरीले उत्पादनतर्फको नेतृत्व गर्नु भएको छ । त्यस्तै, फाइनान्स, सेल्स एण्ड मार्केटिङ, एचआर, टेक्निकल डिमार्पटमेन्ट, लिगलडिपार्टमेन्ट गरेर विभिन्न डिपार्टमेन्टहरु प्रोफेशनल व्यक्तिहरुले यो कम्पनीको व्यवस्थापन गरेका छन् ।
कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
कम्पनीले २०६७/६८ मा व्यवसायिक उत्पादन थालेको हो । त्यतिबेला कम्पनी प्रालिमा थियो । २०७२ सालमा आएपछि यो कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिवर्तन भएको हो ।
यस कम्पनीले २०७१/७२ मा ३८७ करोडको सिमेन्टबिक्री गरेको थियो । २०७२/७३मा ५७६ करोडको बिक्री भयो । २०७३/७४ मा ७३६ करोडको बिक्री भयो । २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्ममा ७१० करोडको बिक्री भएकोछ । २०७५ असार मसान्तसम्ममा १००० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शिवम व्राण्डको सिमेन्ट सेल्स गर्ने योजना अनुसार कार्य गरिरहेकाछौं ।
हामीले २०७१/७२ मा ४१ करोड खुद नाफा गरेका थियौं । २०७२/७३मा ७७ करोड नाफा भयो । २०७३/७४ मा ८१ करोड नाफा गर्यौं । २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्ममा ९३ करोड खुद नाफा भएको छ । यो नाफा हेटौडामा रहेको शिवम सिमेन्टको उद्योगको प्रतिफल मात्र हो । हामीले ३३६ करोड होङ्सी शिवम सिमेन्ट नवलपरासी रहेको संयुक्त लगानीको उद्योगमा लगानी गरेका छौं । उक्त उद्योगबाट प्राप्त हुने नाफा पछि लाभाँसको रुपमा शिवम् सिमेन्ट्समा नै आउने हो । तसर्थ सबै वित्तिय पक्षको अध्ययन गर्दा कम्पनीको समग्र आर्थिक स्थिती निकै मजवुद रहेको छ ।
शिवम् सिमेन्टको चुक्ता पुँजी कति छ ?
हाल कम्पनीको ३ अर्ब ८७ करोड २० लाख चुक्ता पुँजी छ । आईपीओ निष्काशन पछि ५२ करोड ८० लाख पुँजी थपिन्छ । पब्लिकको पैसा आईसकेपछि चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हुन्छ ।
संचित कोषमा कति रकम छ ?
२०७४ चैत मसान्तसम्ममा २१६ करोड रिर्जभ छ । आईपिओको प्रिमियमबाट १ अर्ब ३९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्रिमियम कोषमा थप जम्मा हुन्छ ।
आगामी वर्षमा कम्पनीको आम्दानी कस्तो होला ?
चालु आर्थिक वर्षमा १००८ करोड, २०७५/७६ मा ११०० करोड र २०७६/७७ मा १२६० करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट उत्पादन र विक्री गर्ने योजनाबनाएका छौं ।त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा ११४ करोड, २०७५/७६ मा १४३ करोड र २०७६/७७मा १८५ करोडको खुद नाफा हुने अनुमान छ । जुन होङसी शिवम सिमेन्टमा लगानी गरिएको रकमबाट प्राप्त हुने आम्दानी बाहेकको रकम हो । होङ्सी शिवम सिमेन्टमा गरिएको ३३६ करोडको प्रतिफल उत्पादनमुलक उद्योग भएकोले करिव ३ वर्षपछि मात्र मुनाफा आउँछ भन्ने अनुमानका आधारमा हामीले हेटौडा स्थित शिवम सिमेन्ट लि. को उद्योग तर्फको आम्दानी र नाफालाई मात्र प्रक्षेपण गरेका हौं ।
आगामी वर्ष सेल्स वृद्धि भन्दा नाफा वृद्धि दर उच्च हुने अनुमान गर्नुभयो, कसरी ?
उत्पादनमुलक उद्योगमा स्थिर पूँजी तर्फको लगानी कूल लगानीको ठूलो हिस्सा रहने हुंदा आयकर ऐन बमोजिम ह्रासकट्टीको आधारले शुरुका वर्षहरुमा खुद नाफामा असर गर्दछ । यो उद्योगले उत्पादन थालेको ८ वर्ष भयो । यसअवधिमा धेरै ह्रासकट्टी भईसकेको छ । साथै उत्पादन र विक्रीको बृद्धिदर संगै प्रति वोरा उत्पादन लागत खर्च पनि कम पर्ने हुंदा र हरेक वर्ष बैंक कर्जाको रिपेमेण्ट गरिरहेका कारण कर्जाको व्याजभार समेत कम हुन आउने हुंदा हामीले प्रक्षेपण विश्लेषण गरेर नै गरेका छौ ।
सेयर पुँजी वृद्धि कसरी हुन्छ ?
आ. व. २०७१/७२ मा रु. १२५ करोडको शेयर पूंजी बाट बृद्धि गरी हाल यस कम्पनीमा शेयर पूँजीरु. ३८७ करोड छ । यो सर्व साधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. ४४० करोड हुनेछ । हामीले संस्थापकहरुले थप लगानी गरेको शेयर रकम र संचित मुनाफा मध्येबाट सहायक कम्पनी शिवम होल्डिँग प्रा. लि. मार्फत होङ्सी शिवम सिमेन्ट प्रा. लि. को उद्योगमा रु. ३३६ करोड लगानी गरिसकेका छौं ।
विगतमा कम्पनीले प्रवद्र्धकलाई लाभांश कति दिएको छ ?
विगत तीन वर्षमा हरेक आ. व. मा १० प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गरेका थियौं । कम्पनीमा लगानी विस्तार हुँदै गएकोले कम लाभांश वितरण गरेका हौं । शुरुमा प्रतिदिन ७०० टन उत्पादन क्षमताको उद्योग लगाएका थियौं । पछि त्यसलाई विस्तार गरेर २३०० टन र हाल प्रतिदिन ३००० टन उत्पादन क्षमता बढाएका छौं । होङसी शिवम सिमेन्टमा भएको लगानी सहितको हिसाव गर्दा यस कम्पनीले चार पटक लगानी विस्तार वृद्धि गरिसकेको छ ।
एकातिर कम्पनीका प्रवद्र्धकले थप लगानी पनि गरेको देखियो अर्कोतिर नगद लाभांश पनि लिएको देखियो । नगदको सट्टा बोनस सेयरबाट पुँजी वृद्धि किन नगरेको ?
लगानीकर्ताले प्रतिफल खोज्नु स्वभाविक कुरा हुन जाने हुंदा हामीले लाभाँस वितरण गर्ने साधारण सभाको निर्णय अनुसार वितरण गरेका थियौं । प्रतिफल प्राप्त हुने कम्पनीमा थप लगानी गर्न उत्साहित हुने र सो वर्षहरुमा कम्पनीले क्षमता बृद्धि गरी थप परियोजनाका लागि आवश्यक रकम माग हुंदा प्रर्वदकहरुले सकारात्मक रुपमा लिई थप शेयर रकम लगानी गर्नु भएको हो । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन तथा कम्पनी ऐन २०६३ को प्रावधान बमोजिम प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्काशन गर्न लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी मुनाफामा संचालन भई लाभांश वितरण गरेको, कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्व भन्दा खुद सम्पत्ति बढि रहेको सो लगायतका सबै प्रावधान रहेछ । हामीले आफ्नो उद्येश्य अनुसारका काम कारोवार गर्दा गराँउदा सबै व्यवस्था पुरा भएको अवस्थामा आई पुगेका रहेछौं ।
कम्पनीले कति ऋण लिएको छ ? त्यसको वार्षिक व्याज खर्च कति छ ?
करिव ४ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिएका छौं र त्यसको वार्षिक व्याज खर्च करिव ३० करोड रुपैयाँ छ ।
कम्पनीले किन साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ?
हामीले पहिलेदेखि नै स्थानीयबासीको लागि सेयर निष्काशन गर्ने सोच बनाएका थियौं । पछि सरकारले पनि पब्लिक कम्पनीलाई करमा केही छुट दिने व्यवस्था गर्यो । त्यो स्वागतयोग्य कदम थियो । अहिले सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीले सेयर निष्काशन गर्नै पर्ने नीति बजेटमा ल्याएको छ । हामी उद्यमी व्यवसायीहरुले नेपाल सरकारका नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी कार्य गर्नु पर्दछ भन्ने कर्तव्य पनि ठान्दछौं । यस कम्पनीलाइृ प्रर्वदकको मात्रै होइन सबैको आफ्नै कम्पनी हो भन्ने अनुभति दिलाउने उद्येश्यले पनि स्थानीयलाई २ प्रतिशत र सर्बसाधारणको लागि १० प्रतिशत सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेका छौं ।स्टक मार्केटमा गएपछि इक्वीटी व्याकअप स्ट्रोङ हुन्छ भन्ने मान्यतामा छौं ।
पब्लिक कम्पनी बनाउनु रहर हो कि वाध्यता ?
वाध्यता थिएन । हामी बजारमा फरक ढंगले अगाडि बढ्न चाहेका छौं । पुँजी बजारमा पहिलो पटक सिमेन्ट उद्योगले सेयर निष्काशन गर्दैछौं । यसले बजारमा नयाँ स्वाद पनि दिन्छ ।साथै, उद्योग प्रभावित क्षेत्र लगायतका सबै सर्व साधारण लगानीकर्ताहरुले पनि उद्योगबाट लाभ लिन सकून भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।
प्रिमियम मूल्य किन ? १०० रुपैयाँको सेयर १०० मा नै किन निष्काशन भएन ?
यो कम्पनी २०६० सालमा स्थापना भएको हो । उद्योगले उत्पादन थालेको पनि ८ वर्ष भएको छ । साथै होङसी ग्रुपमा साझेदारी अगाडि बढाएका छौं । कम्पनीराम्रो नाफामा छ । संचित कोषमा नै २१६ करोड रुपैयाँ छ । तीन महिनाको नाफा अझ यसमा हेरेको छैनौं । आज शिवम सिमेन्ट्स नेपालको नम्बर वान ब्राण्ड बनेको छ। कम्पनीको समग्र अवस्थाको अध्ययन निरीक्षण र आर्थिक विश्लेषण गरी इक्रा नेपाल लिमिटेड जस्तो अन्तराष्टिय संस्थाले ग्रेडिँग गरी ३ प्लस ग्रेडको रेटिङ दिएको छ, जुन कम्पनीको आर्थिक लगायतका सबै अवस्था सवल छन भन्ने संकेत पनि हो ।अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्टिगत गरी धितोपत्र निष्कासन तथा वाँडफाँड निर्देशिका बमोजिम प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा पछिल्लो ३ बर्षको पूंजीकृत भएको आम्दानी, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य र अन्तराष्ट्रिय प्रचलनको विधि समेतलाई अवलम्वन गरी प्रिमियम मूल्य निर्धारण भएको हो ।
१०० को सेयरमा ४०० रुपैयाँ लगानी गरेको लगानीकर्तालाई कम्पनीले कस्तो प्रतिफल दिन्छ ?
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफाबाट १० प्रतिशत, २०७५/७६ को नाफाबाट १५ प्रतिशत र २०७६/७७ को नाफाबाट २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने योजना बनाएका छौं । कम्पनीको वित्तिय विवरण अनुसार प्रस्ताव गरे भन्दा बढि दरमा मुनाफा वितरण सकिने भएता पनि कम्पनीले अन्य महत्वकाक्षी परियोजनामा लगानी गर्ने दीर्घकालिन सोच रहेकोछ । आ. व. २०७४/७५ भित्र शेयरमा सर्वसाधारणले लगानी नगरेकै अवस्थामा पनि १० प्रतिशत मुनाफा पाउने प्रस्ताव गरेका छौं । आ. व. २०७५/७६ मा १५ प्रतिशत मुनाफा वितरण गर्ने योजनालाई लगानी पश्चातको पहिलो वर्षमा नै २५ प्रतिशत प्रतिफल हुन आउने कुरा विर्सन हुदैन । कम्पनीको संचित कोष र परियोजनाहरु निक्कै नै उपुयक्त रहेकाले अपेक्षाकृत नाफा भविष्यमा प्राप्त हुने कुरामा लगानीकर्ता विश्वस्त हुनेछन भन्ने विश्वास गरेका छौं ।
प्रिमियमबाट उठेको पैसा के गर्नुहुन्छ ?
प्रिमियमबाट उठेको रकम हामीलेहाल कर्जा चुक्त प्रयोग गरी व्याज खर्च घटाउने र निकट भविष्यमा नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने दीर्घ कालिन योजना र सोच बनाएका छौं । त्यसमा हाम्रो थप प्रोजेक्ट उत्पादन क्षमतामा बृद्धि र उत्पादन विविधकरण गर्ने हो । हामीले लगानी कर्ताको हितलाई ध्यनजर गरेर नै कार्य गर्ने गर्दछौं ।
उत्पादन मुलक क्षेत्रको नियामक निकाय छैन । यस्तो कम्पनीको सुशासन र पारदर्शिता राम्रो हुँदैन भन्ने धारणा सर्वसाधारणमा छन् । यस कम्पनीको सुशासन र पारदर्शिता कसरी कायम हुन्छ ?
विगतआठ वर्षदेखि यो उद्योग चलाएका छौं । यो कम्पनी योग्य, अनुभवि एवं दक्ष प्रोफेशनलहरुले चलाएका छन् । कम्पनीमा पावर डिसेन्ट्रलाईजेशन भएको छ । आयव्यय सबै पारदर्शी छ । ठूला कम्पनीहरुलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट हरेक आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिलाई कर परीक्षण गरी फूल अडिट गरेका हुन्छन् । हाम्रो जस्ता उद्योग क्षेत्रको निगमन र अनुगमन गर्ने थुप्रै निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र निगमन गर्ने गरेका हुन्छन जस्तै उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वन तथा वातावरण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उपभोक्ता हित तथा संरक्षण विभाग लगायतका निकायहरुको नियमित अनुगमन र निरीक्षणका कारण कम्पनीले सबै ऐन, नियम अनुसार मात्र कार्य गर्ने हुंदा नियामक निकाय छैनन् भन्ने होइन । दोस्रो हामी पव्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले सबै काम कुराहरु आर्थिक अनुशासनमा रहि पारदर्शी तरिकाले गर्ने गरेका छौं ।
कम्पनीलेआफ्नो वेवसाइटमा जम्मा तीन पेजको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यति ठूलो कम्पनीले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) अपनाएको देखिदैन, किन ?
धितोपत्र बोर्डबाट सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएपछि वित्तीय विवरणहरु सार्वजनिक गरिरहेका छौं । शेयर निष्कासनसम्बन्धि विवरण पत्र सहितका विस्तृत विवरणहरु हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्दैछौं । कम्पनीले यस वर्ष देखि नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) पद्दति अनुसार वित्तिय विवरण तर्जुमागर्ने योजना गरेका छौं ।